Andao hikarajia Twitter amin’ny #WritingTowardFreedom an’ny Global Voices amin’ny 11 desambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Manoratra mankany amin'ny fahafahana: Politika sy zo nomerika eto Afrika
Voadika ny 06 Desambra 2019 5:25 GMT
Hiresaka politika sy zo nomerika eto Afrika ny karajia Twitter Global Voices #WritingTowardFreedom amin'ny 11 desambra 2019.
Hampiatrano karajia amin'ny Twitter ny Global Voices hiresahana “WritingTowardFreedom: Politics and Digital Rights in Africa,” [Manoratra mankany amin'ny fahafahana: Politika sy zo nomerika eto Afrika] amin'ny 11 Desambra 2019.
[Manoratra mankany amin'ny fahafahana: karajia Twitter iresahana politika sy zo nomerika eto Afrika]
Daty: 11 Desambra 2019
Fotoana: 4 p.m. UTC / 5 p.m. WAT (tsindrio eto raha hijery ny oran'ny faritra misy anao, fa amin'ny 7 ora hariva ny an'ny eto Madagasikara)
Zohio (teny anglisy) ny @gvssafrica raha hanaraka ny resaka
Ny mpandray anjara fanoratana Global Voices afrika atsimon'i Sahara sy Afrika Avaratra no hanolotra ity resadresaka amin'ny Twitter ity. Ireto avy ny mpandray anjara amin'izany: Amanda Leigh Lichtenstein (Etazonia/Tanzania), Dércio Tsandzana (Mozambika/Frantsa), Sandra Aceng (Ogandà) ary Yosr Jouini (Tonizia). Nwachukwu Egbunike (Nigeria) kosa no handamina ny resaka.
I Lichtenstein (@travelfarnow), tonian'ny Global Voices ho an'i Afrika atsimon'i Sahara, no tonian'ny fiarovana ankapobeny ao amin'ny The World an'ny Public Radio International. Amin'ny maha-mpanoratra mahaleotena sy poeta azy, niasa tamin'ireo fisantarana fanandrata-teny zavakanto literera isakarazany ireny izy tany Zanzibar, Ethiopia, ary Etazonia. I Tsandzana (@derciotsandzana), tonian'i Afrika mpiteny paortiogey ato amin'ny Global Voices indray, dia kandidà hamita fianarana hahazoana ny doktorà ao amin'ny Oniversiten'i Bordeaux ao Frantsa. Mpanandrateny amin'ny resaka lahy/vavy sy ny politikan'ny TIC ao Ogandà indray i Aceng (@sandraaceng). Injenieran'ny rindrambaiko avy ao Tonizia indray i Jouini (@thisisyosr),mifantoka amin'ireo fihaonan'ny teknolojia sy ny zon'olombelona. Community Manager ho an'ny Global Voices Afrika atsimon'i Sahara indray i Egbunike (@feathersproject), mpanao fikarohana momba ny media sosialy ary mpanoratra ny Hashtags: social media, politics and ethnicity in Nigeria.
Manomboka amin'ny efatra ora folakandro UTC na amin'ny fito ora hariva ora eto Madagasikara ny karajia amin'ny alarobia 11 Desambra, ao amin'ny Twitter, amin'ny fampiasana ny @gvssafrica an'ny Global Voices Afrika atsimon'i Sahara.
Voarahona mandrakariva ny fahalalahan-gazety sy ny fahalalahana antserasera eto Afrika. Tamin'ny taona 2018, nampiseho ny pejy manokana Global Voices fa ny fanagadrana mpanoragazety, fanakatonana aterineto ary ny fampandoavana hetra ny media sosialy no “fanao an'aterineto” teto amin'ny kaontinanta.
Nitsabaka tao amin'ny fahalalahana maneho hevitra, fahazoana torohay ary kabary ara-politika antserasera ihany koa ny kabary fankahalana foko, ny fahadisoana sy ny fandisoam-baovao, ny fandotoan-drindrina ataon'ny governemanta, araka ny nasehon'ny andian-dahatsoratra navoakan'ireo mpandray anjara ato amin'ny GV amin'ny tetikasa #WritingTowardFreedom.
Vakio bebe kokoa: Writing toward freedom: Politics and digital rights in Africa
Nisondrotra avo dia avo ireny fitsabahana ireny mandritra ny fotoan-dehibe ara-politika tahaka ny fifidianana sy ny hetsi-panoherana. Araka ny tsikaritra voalohany tamin'ny tetikasa, izay mahasahana firenena Afrikana miisa fito: Alzeria, Ethiopia, Mozambika, Nizeria, Tonizia, Oganda, ary Zimbabwe:
Ny tetikasa #WritingTowardFreedom dia vatsian'ny Africa Digital Rights Fund ao amin'ny Fiarahamiasa amin'ny politika iraisampirenena amin'ny TIC ho an'ny faritra Atsinanana sy Atsimon'i Afrika (CIPESA).
Niakatra nandritra ny fifidianana sy ny fihetsiketseham-panoherana ara-politika ny fandisoam-baovao antserasera tao Alzeria, Tonizia ary Zimbabwe.
Lasa kianjan'ady amin'ny resaka fankahalana foko, fandisoam-baovao ary propagandy politika aelin'ireo mpiantsehatra goavana ara-politika sy ny mpanohana azy ny sehatra media sosialy tao Nizeria sy Ethiopia.
Nahitana imaso ireo fanohintohinana antserasera sy andavanandro ireo mpanora-gazety ny fifidianana vao vita tao Mozambika.
Ao Oganda, noho ny fanatonan'ny fifidianana amin'ny taona 2021, misy ny ahiahy fa hamoaka indray ny fanapahana fidirana amin'ny aterineto ny governemanta.
Efa nandray anjara tamin'io tetikasa io amin'ny maha-mpanoratra sy tonia (mpanitsy) ireo hiady hevitra amin'ity resadresaka ao amin'ny Twitter ity. Hampitaratra fahazavana bebe kokoa ry zareo amin'ireo tsikaritra nisongadina avy amin'ny tantara ary hiditra resadresaka midadasika kokoa ao amin'ny fihaonan'ny politika, fahalalahana maneho hevitra ary ny zo nomerika.